Soo saarista iyo Warshada Silinder-ka ee Shiinaha |Chinatown
Taxanahan darajada dhululubada jeexjeexay, ka hor intaan la keenin, waxaa la marsiin doonaa dhowr tijaabo oo tayo leh, iyadoo la hubinayo in alaab kasta ay leedahay tayo la doonayo iyo nolol adeeg oo dheer.
Dhululubada Taxanaha ee FGJZ waa mashiinka nadiifinta iyo darajooyinka hadhuudhka loo isticmaalo maaraynta badarka sida sarreenka, barley, bariiska, galleyda, iyo wixii la mid ah.Waxay ka saari kartaa wasakhda ka gaaban ama ka dheer badarka, sidoo kale waxay u kala saartaa miraha sida dhererkooda.
Taxanahan darajada dhululubada jeexjeexay, ka hor intaan la keenin, waxaa la marsiin doonaa dhowr tijaabo oo tayo leh, iyadoo la hubinayo in alaab kasta ay leedahay tayo la doonayo iyo nolol adeeg oo dheer.Intaa waxaa dheer, wakhtiga dhalmada waa mid gaaban.
1. Mashiinku wuxuu si wax ku ool ah uga saari karaa wasakhda gaaban iyo kuwa dheer labadaba.
2. Naqshadaynta qaab-dhismeedka qaybaha iyo aaladaha quudinta ee kala duwan waxay ka dhigayaan dhululubada inay si habboon u beddelaan xiriirinta taxanaha ah iyo isku xirka barbar socda.
3. Dhululubada waxa ay ka samaysan tahay shay aad u heersare ah oo ka-hortagga xidhashada, sidaa awgeed nolosheeda adeeggu waa mid aad u dheer.
4. Dhululubada la jeexjeexay waxa loo kala qaybin karaa laba qaybood, oo la socota qalab degdeg ah.Markaa hawl-wadeenadu waxay si dhakhso ah oo fudud u bedeli karaan dhululubada.
5. Indents-ka waxa lagu farsameeyaa farsamo isku dhafan.Dusha sare ee shaandhada la jeexjeexay ayaa bakhti ah, sidaas awgeed tayada iyo cimri dhererka labadaba waa la hagaajin karaa.
Nooca Awood Awood Mugga hawada iska caabin Dhexroor× Dhererka Tirada Silinder Cabbirka (L×W×H) Miisaanka
t/h KW m3/h Pa mm sawir mm kg
Mishiin Nadiifinta Abuurka
MLT Taxanaha Degerminator
Soodejiye Vibro Tayada Sare leh
Qalab-shiidka Daqiiqda Burburiyaha Cayayaanka